Somali News 07.12.21 | KWIT
In kasta oo luuqadaas ay jirto, afhayeen uhadlay gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay in wali ay jirto fursad ay Texas ugu danbeyn ku qaadi karto qarashaadka ka dib marka howlgalka la soo gabagabeeyo.
Saraakiisha Iowa ayaa horay u sheegay inay filayaan inay u diraan 25 ilaa 30 sarkaal oo ka socda Waaxda Badbaadada Dadweynaha ee Iowa si ay howlo labo usbuuc ah u qabtaan bishaan.
Dhanka kale, Badhasaabka Nebraska Pete Ricketts wuxuu kordhiyay hawlgalinta 15 askari oo ilaalada gobolka ah xadka Maraykanka iyo Mexico muddo laba toddobaad kale ah.
Wiil dhalinyaro ah oo u dhashay magaalada Sioux City oo lagu eedeeyay toogasho lagu hoobtay oo ka dhacday guri ku yaal magaalada Morningside ayaa sheegay in qareenkiisa uu ku cadaadiyey inuu qirto dambiga lagu soo oogay. 18-sano jir Anthony Bauer ayaa doonaya inuu ka laabto codsigiisa ah dilka darajada 2-aad ee toogashada xaflada sanadka cusub oo lagu dilay 18-jir Mia Kritis (kree-tis). Heshiiska qirashada ayaa sheegaya in Bauer ay waajib ku tahay inuu dhameysto 35 kamid ah xukun 50 sano ah.